Zvinhu zvitatu Zvinoitwa Nembudzi Dzinobhururuka dzeNarcissist (+ Maitiro Ekuvadzivirira) - Vanarcissist
Nemusoro weichi chidimbu, unogona kufunga kuti mhinduro ndeyekubvisa hallucinogens, asi kwete.
'Flying Monkeys' izwi rinoshandiswa mune zvepfungwa kutsanangura sycophantic hanger-pane avo vanowanzo tenderera kutenderedza narcissists, uye kutsigira / kudzivirira zvese zvavanoita.
Kunge Wakaipa Witch yeWest West dzinobhururuka tsoko muWizard yeOz, 'Flying Monkeys' (kubva zvino zvichinzi 'maFM') ndiwo mabhurugwa evhosi anoshandiswa narcissist kuita kwavo kubhidha.
Izvi zvinogona kunzwika kunge zvisina kusimba uye zvisina musoro psychotic, uye zvingave zvakaoma kutenda kuti chero munhu angatsikitsira pasi kushandisa vamwe kuita basa ravo rakasviba kwavari, asi hei. Zvinoitika kakawanda kupfuura iwe ungafungidzira.
Pazasi pane mimwe mienzaniso mishoma yekuti izvi zvinogona kuitika sei, uye nemabatiro aungaite idzo dzakapusa.
Mashandisiro anoita maNarcissist Flying Monkeys
Kana iwe wakabatanidzwa narc kwenguva yakati, iwe unonyatsoziva kutukwa nemabatiro avanogona kushandisa vamwe vanhu kuti vatenderane nezvido zvavo nezvinodiwa.
Chimwe chiitiko chakajairika uko maFM anotorwa ari mushure mekurambana. Iyo narc pasina mubvunzo inokwezva vashoma vanhu vatsva kuti vasimbise hunhu hwake, uye idzi newbies dzichaudzwa zvese nezve zvinotyisa, kupenga, uye pamwe kutotambudza zvekare ex yavo.
Ava vanhu vatsva vangangove vanonzwira tsitsi, vane tsitsi, uye vanobva vangoda kunyaradza uye kuchengetedza narc nepese pavanogona napo.
Vanogona kupa kuti vabatsire zvisinei nepavanogona, izvo zvinopa iyo narc mukana wakakwana wekuramba uchishanda mashiripiti avo akaipa muhupenyu hwako.
Tsoko dzinobhururuka idzi dzinogona kushandisirwa kubatsira mubatsiri ne…
Ngatiti iwe ndiwe wapedza hukama, uye waenda ' hapana kuonana ”Mukuedza kuzvibvisa uye pora kubva munyonganiso iyoyo .
Narc inogona kuwana imwe kana maviri maMMM kuti vasore maakaundi enhau eruzhinji kuti vaone zvauri kuita, uye vadzokere.
basa rakakwana remunhu anonzwira tsitsi
Maitiro Ekudzivirira Izvi:
Seta ako enhau enhau pasocial, uye ita shuwa kuti iwe unonyanya kusarudza pamusoro pekuti ndiani waunopa zvikumbiro zveshamwari.
Gamuchira chete zvikumbiro kubva kushamwari dzeshamwari, uye bvunza zvakawandisa kubatana sekugona kwaungaita kuti vatsva ava ndivanaani. Ita zvishoma recon usati wavapa mvumo.
Izvi zvingaite senge zvine paranoid, asi kana iwe wakashanda nesimba kuti ubude kubva mukati memabatiro eva narcissist, zvakakosha imwe yekuwedzera kuedza kuti uzvichengete wakachengeteka.
Kutora matanho aya kunoreva kuti haufanire kunetseka nezve chero ruzivo rwemunhu nezve iwe kudzoka kune wako wekare. Vake vateveri havangakwanise kuwana chero chinhu pamusoro pako chausingagovane neruzhinji rwevanhu.
2. Makuhwa / Smear Campaigns
Vazhinji vedu tinowanzoita makuhwa nguva nenguva, asi kana zvikaendeswa kune imwe nhanho uye iwe uri murombo anoyamwa ari kutaurwa nezvake, zvinogona kukuita kuti unzwe zvakaipa.
Zvinosuruvarisa, narcissist nevateveri vavo vanoita mune iyi mhando yekushusha maitiro nguva dzese.
Chinhu chinosiririsa, chevechidiki kuita, asi kana vachinzwa munzira ipi neipi vadzvinyirirwa uye vachida kukuranga iwe nekuda kwekumisa rwendo rwavo rwemagetsi uye kutonga pamusoro pako, vanogona kukotamira kumushandirapamwe wekuzora.
Kana iwe usina kujairana neiyi pfungwa, iyo yakakosha pfungwa ndeye kutendeutsa vamwe vanhu kuti varwe newe.
Vanoita izvi nekuvaudza nhema pamusoro pezvinhu zvinotyisa zvawataura kana zvawakaita, kana kutora zvinhu zvawakavaudza muchivimbo (kumashure pawaive naïve yakakwana yekuvimba navo) nekuvaita veruzhinji.
Chinangwa ndechekukuranga nekuda kwekukanganisa kupi zvako kwawakafungidzira pamusoro pavo, uye kuve nechokwadi chekuti vanotora danho nekukupenda iwe se 'munhu akaipa' usati wawana mukana wekuita zvakafanana kwavari.
MaMMF anogona kubatsira mune iyi nzira nekuwedzera mamwe mazwi kuchorasi ye sh * t ichitsikwa pamusoro pako.
Mushure mezvose, ex asingagutsikane anodzingwa zviri nyore saizvozvi, asi kana vanhu vakati wandei vari kutaura chinhu chimwe chete, munzvimbo dzakasiyana dzemagariro… hameno, panofanira kuve nechokwadi mune izvo, handiti?
Kazhinji, iyo smear mushandirapamwe inosanganisira shamwari dzese uye kunyangwe mhuri yako iyo iyo narc ichave yakashongedza pamusoro pehukama hwako.
Izvi zvinoita kuti zvikuvadze zvakanyanya uye zvinogona kutungamira mukudzikira muhukama hwakakosha hwakawanda mukuenda kumwe.
Zvimwe zvakakosha kuverenga narcissist (chinyorwa chinoenderera pazasi):
Iyo Grey Rock Maitiro Ekubata NaNarcissist Kana Iwe Usinga Gone Hapana Kubata
5 Nzira dzeNarcissist Dzinodzivirira Ivo Vanyajambwa Kubva Kubva
8 Zvinhu Zvinhu Narcissist Haigone Kukuitira Iwe (Kana Chero Mumwe Munhu)
Iyo Rollercoaster Yekudzoreredza Kubva kuNarcissistic Kushungurudzwa
'Simuka Pamusoro' inonzwika senge trite uye yakanyanyoshandiswa mutsara, asi iri yakakodzera. Iva akanakisa, wakasarudzika vhezheni yako, pane kuyedza kutsiva kana kuzvidzivirira.
Kana mumwe munhu akakudaidza nezvezvinhu zvinotyisa zvaunofungidzira kuti wakaitira narc iri mubvunzo, ingo taura kuti iwe unoshuvira narc mufaro uye unovashuvira zvakanaka.
Izvi zvinozovhiringa tsoko zvoita kuti vafembere kechipiri kuti ruzivo rwavakapihwa ichokwadi here.
ndiani murume waAshley graham
Chaizvoizvo, kana iwe ukasazvibata semunhu anotyisa zvavakataura kuti ndizvo zvauri, ivo vangangodaro vanorega uye vobhururuka vachienda.
Izvo zvinogona kutobvambura vamwe vanhu - kunyanya avo vaikuziva iwe pamberi peiyo narc - kunze kwavo hypnotized mamiriro uye kuvayeuchidza nezvekuti ndiani iwe chaizvo ndiwe uye kwete kuti iyo narc iri kukuita iwe kuve iwe.
Regedza zviri kutaurwa, vharidzira vanhu avo vekunze vanotyisa uye vanokutuka, uye ramba uchienderera mberi.
3. Boka Kurwisa Uye Kupindira
Iri zano rinosanganisira boka reFlying Monkeys rinoshanda pamwechete mukuyedza kukugonesa kuti imwe mhando yemaitiro iri mukuda kwako.
Chete zviri chaizvo mune yavo / iyo narc yavanomiririra.
maitiro ekudzora zvinhu muhukama
Zvakajairika mumhuri umo narc iri kutaurwa iri mubereki, sezvakataurwa mubereki anogona kazhinji kuisa chepfu kuvanin'ina uye nhengo dzemhuri dzakanangana newe nekuvaudza kuti wakavarwadzisa zvakadii, kuti havana kana kumboita chakaipa, nezvimwe
Unogona kuzviwana uri muchiitiko umo hama dzako, hanzvadzi, babamunini, vanatete, uye / kana kunyangwe mumwe mubereki wako ari kukuudza kuti vanoziva zvese nezve mamiriro uye ivo vanoziva maitiro aunofanirwa kuzvibata kuti vazvigadzirise.
Maitiro Ekudzivirira / Mira Izvi:
Kana iwe usingakwanise (kana kusada) kuzvicheka zvese kubva muhupenyu hwako nekukasira, saka chinhu chakanakisa chaungaite kuita ramba kuita .
Ziva kumonyoroka kwavo uye kuyedza paFOG (Kutya, Kusungirwa, uye Mhosva), uye usabatana navo.
Unyanzvi hwakanaka ndewekuti, pavanenge vachitaura, kuvaita kuti vatsanangure chimiro chavo uye zvikonzero zvavo kumashure kwezvavanenge vachitaura.
Ramba uchibvunza mibvunzo, ramba uchivabvunza kuti vataure nezve izvo zvavakaudzwa, izvo zvavano 'ziva,' zvavanoda, nezvimwe ... asi usaedze kudzivirira maitiro ako kana kuita chero kuyedza kuudza divi rako renyaya. .
Icho chokwadi chekuti vatora chiito chekupindira ichi chinoreva kuti havana hany'a nechinhu chipi zvacho chaunofanira kutaura, uye vakazvitendera kuti vanyatsofurirwa nekushandisirwa netsiva anonetsa.
Kana vachinge vataura zvavanogona, unogona kunongedzera kuti ivo pachena vauya kune kwavo mazano uye mhedzisiro vasina kana kumbotaura newe vari vega nekuwana divi rako renyaya, saka maonero avo haashande, uye iwe hauna hanya nazvo chero chinhu chavanofanira kutaura.
Ingo ita chokwadi chechokwadi chekuti iwe unoramba wakadzikama uye nemweya wakasurukirwa mukati mechiitiko.
Chinangwa chavo ndechekuita kuti utye uye usashamaire, uye kana ukaramba uine chinangwa, wakadzikama, uye uchiratidza kushoma kwekudyara kwepamoyo, saka wawana ruoko rwepamusoro uye havakukanganise zvachose.
Vanhu havagone kukuvadza iwe kana iwe usingavape mukana wekusvika kwauri, kungave panyama kana pamoyo.
Kana iwe usingakwanise kuzvibvisa panyama kubva kune narcissist neyavo Flying Monkey brigade, saka pazviri zvishoma, iwe unogona kuzvibvisa wega pamoyo.
Muenzaniso wakanaka weizvi unenge uri mufungo we 'sutu isina chinhu' muAikido: kuti iwe uri mudziyo usina chinhu, uye unongoshandisa simba remupikisi kuhwina kurwa. Vanonese kunze, uyezve famba uende.
Muchokwadi, kuenda kure pakupedzisira ndiyo nzira yakanakisa iwe yaunogona kunge uchifanira kubvisa vese narcissist uye avo monkey minions kubva muhupenyu hwako, zvachose.
Zvinogona kuve zvakaoma zvakaoma uye zvinorwadza kuita izvi, kunyanya kana Flying Monkeys vari nhengo dzemhuri kana dzakarukwa zvakanyanya muhupenyu hwako hwemagariro, asi iwe unofanirwa kuzvitarisira wega nenzira dzese dzinodiwa.
Kana izvi zvichireva kushandura zita rako, kurongedza zvinhu zvako, uye nekufamba nenyika kuti utange hupenyu hutsva husina chinhu, kure kure neanokushungurudza, enda izvo.
mitambo yewrestling yenguva dzese
sei hupenyu huchiyamwa zvakanyanya
makotesheni nezvekuwana rugare mune nyonganiso
sei murume wangu achinditsamwira nguva dzese
zvandiri kuita nemienzaniso yangu yehupenyu
wwe mbishi june 15 2015